Miyay qalab cilmi-baaris ah oo loogu talagalay iibsadaha Amazon runtii ah lagama maarmaanka u ah liistada alaabada iiga?
Xaqiiq ahaan, meherad kasta oo ganacsi ama macaamil ganacsi oo yaryar (sida Amazon laftiisa, iyo sidoo kale eBay, dukaanka Alibaba, Walmart, iwm. ) waxay dhab ahaantii u eg yihiin matoorada raadinta asalka ah ee dabiiciga ah. Taas macnaheedu waa in istaraatijiyad wax ku ool ah oo wax ku ool ah ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah guulaha ganacsiga tafaariiqda ee halkaas ka jira. Habkaas, baaritaan caan ah oo si qotodheer loo bartilmaameedsan yahay iyo kan qotodheerba waa dhab ahaan waxa ay barbar dhigayso khadka u dhexeeya mashruuca internetka ee runta ah iyo guuldarada ganacsiga oo dhammaystiran - wet corn to dry conversion chart. Taas macnaheedu waxa weeye in la adeegsanayo qalab cilmi-baaris oo muhiim ah oo loogu talagalay dadka iibiya Amazon waxa ay noqotaa baahi adag - waxay u baahan tahay si ay u noolaato iyada oo hoos timaada heerka dhabta ah ee suuqa tartanka suuqa - halkii nooc kasta oo raaxo ah sida aad u malayn karto. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan kuu muujiyo dhowr ka mid ah qalabka muhiimka ah ee muhiimka ah ee iibiya Amazon. Dhammaantood waa caawiyayaal internet ah oo la isticmaalo oo la isku halleyn karo Waxaan tijaabiyey liiskayaga liiska alaabta ee ku yaala suuqa wayn ee dadweynaha - dareemayaan ugu yaraan inay isku dayaan kuwa soo socda: (
Lama yaabin, baadhitaankan muhiimka ah ee muhiimka ah iyo adeegga maamulka xayeysiinta ayaa ah qalab wax-ku-ool ah oo awood leh oo sida caadiga ah loo isticmaalo qaybta libaaxda ee SEO. Dabcan, Qorshaha Keyword keyword Google ma aha mid ka mid ah kuwa si khaas ah loogu talagalay qalabka iibka Amazon. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado cilmi-baarista muhiimka ah iyo fahamka isbeddelada raadinta ee muhiimka ah - Qalabka Qorshaha Waxyaalaha muhiimka ah waxa uu ku siin karaa meel fiican oo bilawga ah si aad u bilawdo, si waafaqsan muujinta sawir weyn oo ah dhammaan ereyada muhiimka ah ee faa'iido leh iyo faa'iidada faa'iido leh. Fikrad ahaan, haddii la saxo habka saxda ah, waa inay noqdaan furahaaga ugu muhiimsan bartilmaameedka si aad u socodsiisid taraafikada dabiiciga ah si aad u liisgareyso liiska alaabta Amazon, oo markaa go'aaminta fursadahaaga ganacsiga guud ee dakhliga.
Marka ay timaaddo aqoonsiga ereyada ugu faa'iidada badan ee faa'iido leh iyo waa inay ku guuleystaan ​​baaritaan dheeraadka ah ee wax iibsashada sheyga, qalabka ugu wanaagsan ee iibiya Amazon. Wax walba waa wax sahlan. Dhamaan waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad gashid magac kasta ama shakhsi ahaan Amazon ASIN - oo aad sameysid, inaad haysato liis qiimo leh oo muhiim ah oo kuu diyaar ah ku dhawaad ​​marnaba.
Waa doorasho kale oo wanaagsan oo loogu talagalay cilmi-baarista muhiimka ah iyo liiska soo-saarka Amazon. AMZ Insight waa qalabka oo dhan oo loogu talagalay iibiyeyaasha Amazon, si ay u noqoto mid sax ah. Taasina waa sababta ay taasi noqon lahayd "qalab" oo kaa caawin kara oo kaliya ma aha fikrado tartan ah iyo soo-jeedin dheer oo ku saabsan ereyada muhiimka ah, laakiin adoo helaya su'aalaha raadinta ee ugu sareeya, qiimeeynta qiimaha celceliska celceliska, cabirida tirada alaabooyinka la xidhiidha ee horey loogu soo bandhigay qodob muhiim ah oo qeexaya, heerka qiyaasta hadda ee tartanka muhiimka ah, xayeysiiska CPC iyo xitaa in ka badan.